Badii balleessaa!Waan miliqee ba’e Sher waliif godhaa waraana bilisummaa Oromoo biraan gahaa. – Kichuu
HomeAfaan OromooNewsBadii balleessaa!Waan miliqee ba’e Sher waliif godhaa waraana bilisummaa Oromoo biraan gahaa.
Badii balleessaa! Waan miliqee ba’e Sher waliif godhaa waraana bilisummaa Oromoo biraan gahaa.
Akkuma beekamu Rabbiin caalaa mootummaan Ethiopia kan sodaataa jiru Jaal Marroo dirribaati. Yeroo gara yerootti mootummaan Ethiopia kuni nama jabaa Oromoo kan maqaan isaa J Marroo jedhamu kana qabuuf ykn Ajjeesuuf malli inni hin malle hin jiru. Ummata Akkanatti marroo kana jaalatu kana burjaajessuuf wanti inni hin goone hinjiru. Osoo namni kuni lubbuun jiru yeroo 3 ol Ajjeefnee jirra jedhanii ummata burjaajessaa turan. Yeroo Sadanuu inni inuma jira. Meeshaa teeknoolojiin deeggarame kan bilbila namaa butu isaan qabuuf jechaa raashiyaa irraa doolaara miliyoona hedduun bitee galche. Sunis waan isa milkeessu ta’ee Mul’ataa hin jiru.
Sababni kana godhaniif Akkuma Jawaar
Muhammad harkaan gahannaan qabsoo karaa nagaa waanjedhamu Oromiyaa irraa dhaba godhan kanatti, hoggaanaa waraana bilisummaa Oromoo jaal marroo kanas qabnaan ykn Ajjeefnaan waraana hafe takka takkaan gurra qabnee bosona keessaa guurra homaa wanti isaan kana booda faayidaa qaban takkallee hinjiru jedhanii of Amansiisaniiru!
Amma Ammoo maloonni isaan armaan olitti malatan sun waan baasuu dhabeef mala biraa kan miliqee bahe, mala
#badii_balleessaa kan jedhu tokko projektii bocanii qopheessaniiru.
Projektiin kuni ilma Oromoo tokko waraana humna Addaa Oromiyaa kan jedhamu kana keessaa tooftaa marroo Ajjeesee du’u qopheessaniifii gara waraana bilisummaa Oromootti bobbaasaaru! Akkuma beekamu waraana mootummaa keessaa mootummaa gananii yeroo irraa gara yerootti kan waraana bilisummaa Oromootti makamu baay’eedha.
Waraanni bilisummaa Oromoos waraana mootummaa ganee dhufe kana yeroo hunda harka banee garaa Qulqulluun simachaa turuun isaa niyaadatama. Amma Ammoo mootummaan kuni warra Akkasitti mootummaa ganee gara waraana bilisummaa Oromoo dhufu fakkeessuudhaan nama Oromoo fi Oromiyatti saa’atii tokko keessatti dukkaneessu qopheessee jira
Malli ittiin bobbaasaa jiran, maatii gurbaa waan mo